‘ आधा जिस्ता’मा डा. बाबुराम ज्ञवाली::DainikPatra
‘ आधा जिस्ता’मा डा. बाबुराम ज्ञवाली
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गर्नु भई पूर्वीय कौटिल्य अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नु भएका प्राध्यापक डा. बाबुराम ज्ञवाली विशेषतः साहित्यका विविध विधाहरुमध्ये जीवनी, समालोचना र निबन्ध क्षेत्रमा साधनारत हुनुहुन्छ । उहाँको पहिचान स्थानीय, राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको छ । बौद्धिक क्षेत्रमा उहाँ बुटवलको गौरव हो । हाल उहाँ बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यपनरत हुनुहुन्छ ।
पछिल्लोपटक उहाँको एउटा कृति ‘आधा जिस्ता’ निस्केको छ । आधा जिस्ता कृतिको नामकरण किन राखियो होला भन्ने कुतूहल पाठकलाई लाग्न सक्छ । यो कुनै रहस्यमयी शब्द हैन । जिस्ता कागजको सामान्य प्रयोग हुने इकाई हो । जिस्ताको अर्थ हुन्छ २४ पाना । उहाँले आफ्ना महत्वपूर्ण १२ प्रबन्धहरुलाई आधा जिस्ता नाम दिनु भएको हो । उहाँले यसलाई आजको पेपरलेस युगमा कागजी पुस्ताको सम्झनामा लेखेको बताउनु भएको छ ।
आधा जिस्ता कृतिमा १२ प्रबन्धहरु छन् । यी आत्मगत नभई विवरणात्मक एवं वस्तुपरक भएकोले मैले प्रबन्ध भनेको हुँ । यसमा ‘कहाँ लैजाला कम्प्युटरले मानिसलाई,’ ‘यसोधराको यशगान’, ‘मैले मन पराएका तीन किस्सा’, ‘विश्व विजयी एलेक्जेन्डर र तक्षशिलाको आचार्य’, ‘प्रेम, निष्ठा र सुन्दरताको प्रतीक पर्वः तीज’, ‘बिपिका आध्यात्मिक विचारको समीक्षा’, ‘भानुभक्त, रामकथा र त्यसको सामाजिक ऐतिहासिक परिवेश’, ‘बधू शिक्षा भावी जीवनको प्रशिक्षण’, ‘शब्दहरुको अर्थ विस्तार र शब्द संकुचन ः केही उदाहरण’,‘जैसीले नजाजेको तर अल्छीले जानेको’,‘श्री कृष्णः पुत्र प्रेमी र पति’,‘सम्पादनको पहिलो अनुभव’ आदि हुन् । यी १२ प्रबन्धहरुको माध्यमबाट उहाँका दृष्टिकोणहरु प्रकट भएका छन् ।
डा.बाबुराम ज्ञवालीका सम्पूर्ण कृतिहरुमा विषययवस्तुप्रतिको गाम्भीर्यता, विश्लेषणात्मकता, भाषिक प्राञ्जलता, धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रतिको मोह झल्कन्छ । उहाँ पूर्वीय आर्ष सभ्यताको पुजारी हो । उहाँका ४० कृतिहरु प्रकाशित छन् । सबै कृतिहरुमा बौद्धिक ओजस्विता भेटिन्छ ।
डा.बाबुराम ज्ञवाली एक आदर्शवादी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँमा अहंकारको लेस पनि छैन । उहाँमा कुनै प्रकारको लोभ, मोह, मद र मात्सर्य भेटिदैन । यसबाट उहाँ विरत हुनुहुन्छ । विनयशीलता र सरलता उनको विशेषता हो । यही भागवतीय अभिलक्षणले उहाँलाई स्थापित गरेकोछ । उहाँको जीवनशैलीमा पूर्वीय मूल्य मान्यता प्रकट भएको देखिन्छ । उहाँमा गान्धीका गुणहरु छन् ।
यस कृतिको प्रकाशन किरण पुस्तकालय गुल्मीले गरेको छ । किरण पुस्तकालय मोफसलमा सञ्चालित एक पुरानो पुस्ताकालय हो । यो पुस्तकालयले करिब डेड दर्जन जति पुुस्तकहरु प्रकाशन गरेको छ । किरण पुस्तकालयको यो अन्तिम प्रकाशन हो ।
अन्त्यमा जो व्यक्ति आफूलाई व्यक्त गर्दैन । ऊ निर्वैयक्तिक हुन्छ । डा. बाबुराम ज्ञवाली एक उदाहरणीय आदर्श व्यक्ति हुन् । उनमा मानवता देखिन्छ । वर्तमानको स्वार्थपूर्ण कोलाहलबाट पृथक रहेर आदर्शवान पुरुषको रुपमा स्थापित भई नयाँ पुस्तालाई नैतिकता र स्वप्रेरणाबाट मार्ग दर्शन गर्ने प्रा.डा. बाबुराम ज्ञवालीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ।